Manneen murti ajaja kennan dirqisiisanii raawwachiisuu danda’u’ – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsManneen murti ajaja kennan dirqisiisanii raawwachiisuu danda’u’
Solomoon Araddaa: ‘Manneen murti ajaja kennan dirqisiisanii raawwachiisuu danda’u’ – Aanga’aa Mana Murtii
Manneen murtii seeraa fi heera qofa bu’uura godhachuun dirqama heera mootummaan itti kenname bahachuuf walabummaan hojjetaa jiru jedhan pireezidantiin itti aanaa mana murtii Waliigalaa Obbo Solomoon Araddaa.
(bbcafaanoromoo)–Kana kan jedhan komii adeemsaa fi ajaja mana murtii raawwachiisuu ilaalchisee abukaatota fi maatii namoota ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa booda hidhaman irraa ka’u ilaalchisee gaaffii BBC’n dhiyeesseef yoo deebisanidha.
Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hokkora uumame, lubbuu badee fi qabeenya barbadaa’een shakkamuun namootni kuma hedduutti lakkaa’aman to’annoo jala oolanii dhimmi isaanii seeraan ilaalamaa jira.
Namoota to’annoo jala oolan ilaalchisee mana murtiitti yeroon dhiyaachuu dhabuu, maatii fi abukaatoowwaniin wal arguu dhorkamuu fi komiiwwan kaanis ni dhagaahamu.
Irra caalaatti kan ogeeyyii seeraa fi maatii hidhamtootaa biratti komii kaasaa jiru garuu namootni manni murtii mirga wabii eegeefi poolisiin gadi dhiisuu diduudha.
Caaltuu Taakkalaa, Gaazexeessaa OMN Mallasaa Dirribsaa, gaazexeessaa lammii Keeniyaa Yaasiin Juumaa fi namoonni biroo galmee Ciibsaa Abdulkariim fi Joombaa Huseen jalatti shakkamanii dhiyaatan kanneen manni murtii mirga wabii eegeefi poolisiin gadi dhiisuu dide keessa jiru.
Gaazexeessaa OMN Mallasaa Dirribsaa Roobii Hagayya 05 manni murtii mirga wabii eegeefi maatiin ulaagaa barbaachisu erga xumuranii booda poolisiin gadi dhiisuu didee galmee biraa jalatti qorannoon duraa akka irratti banamu taasise.
Caaltuu Taakkalaa amma dura koomishinii poolisii magaala Finfinneetti hidhamtee, yakka ittiin shakkamteen manni murtii sadarkaa duraa Araadaa wabii qarshii 4000’tin erga gadhiiseen booda poolisii Oromiyaatiin deebitee too’annoo jala ooluu maatiin BBC’tti himaniiru.
Poolisiin Oromiyaa mana murtii aanaa magaala Sulultaatti dhiyeessee manni murtichaa galmee ishee erga qorateen booda gaaffii poolisiin too’annaa jala akka turtuuf dhiheesse kufaa gochuun mirga wabii duraatiin akka gadhiifamtu irra deebiin ajajeera.
Gaazexeessaa lammii Keeniyaa Yaasiin Juumaa dabalatee namoonni Ciibsaa Abdulkariim fi Joombaa Huseen jalatti shakkamanii dhiyaatan 10 erga manni murtii federaalaa sadarkaa duraa mirga wabiin akka gadi dhiifaman murteessee booda poolisiin gadi dhiisuu didee ol iyyannoo irratti gaafate.
Manni murtii olaanaa federaalaa ol iyyannoo poolisii kuffisuun namootni kunneen mirgi wabii akka eegamuuf irra deebiin murteessee jira.
Namoota manni murtii irra deebiin akka gadi dhiifaman murteesse abukaatonni fi maatiin akka gadi dhiifaman abdiin eegaa akka jiran dubbatu.
Haa ta’u malee ajaja manni murtii kennu fudhatee akkaataa ajajameen hojiirra oolchuuf rincicaa jiraachuun poolisii namootni hedduun sirna haqaa biyyattii irratti gaaffii akka kaasan taasisaa jira.
“Bilisa taanee hojjechuun dirqama keenya”
Pireezidantii Itti Aanaa Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa kan ta’an Obbo Solomon Aradda yaada dhimma kanarratti BBC’f kennaniin ‘mirga wabii erga manni murtii kennee booda poolisiin hidhamaa tursiisuu hin danda’u, kuni wanna gaaffii keessa galu miti’ jedhu.
Shakkamaan tokko wanni ittiin himatame mirga wabiin bahee alaa dhimma isaa akka hordofu kan isaaf hayyamu ta’ee manni murtii yoo ajaja kenne poolisiin sana hojiirra oolchuuf dirqama qab jedhu Obbo Solomoon.
Manni murtii ajaja dabarsee murtiin sun kan hin raawwanne yoo ta’e, qaamni murtiin kun naaf hin raawwatamne jedhe mana murtii ajaja kennetti deebi’ee iyyachuu qaba jedhu.
“Ajajni mana murtii naaf hin raawwatamne, cabee jiraa, manni murtii dirqisiisee akka naaf raawwachiisu jedhee iyyata yoo dhiyeeffate ni raawwatamaafi” jedhan.
Manneen murtii ajajni kennan hin raawwatamne yoo ta’e dirqisiisanii akka raawwatamu gochuu ni danda’u jedhan.
Aanga’aan kun dhimman manneen murtii naannoo ilaalchisee komii ka’urratti yaada hin kennine. Darbees galmee namootaa maqaa dhawuun yaada kennuurraa of qusatanii jiru.
Haa ta’u malee akka waliigalaatti bu’uura seeraa fi heeraa qofaan, qaama hoji raawwachiiftuu mootummaa irraa bilisa ta’anii akka socho’an dubbatu.
“Nuti akka mana murtiitti bilisa taanee hojjechuun dirqama keenya, dirqama heerri mootummaan nurra kaa’e. Abbootiin seeraa keenyas seeraa fi heera qofarratti hundaa’anii dhimma kana akka ilaalan dirqama qabu. Kana hubannee hojjechaa jirra.”
Komii manni murtii mirga wabii eegee, poolisiin kabajuu dide jedhamee ol iyyannoon dhiyaatee sanaanis murtii kennamurra uummatni manni murtii seeraa heera irratti hundaa’ee hojjetaa jira moo hin jiru kan jedhu madaaluu ni danda’a jedhu.
Walumaagalatti manneen murtii dirqama heera mootummaan itti kenname bahachuuf bilisa ta’anii socho’aa jiru jedhan.